Abaartii ugu xumayd muddo sannado ah oo Puntland ka jirta, iyadoo 1.5 milyan oo qof ay u baahanyihiin cuno iyo biyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAbaartii ugu xumayd muddo sannado ah oo Puntland ka jirta, iyadoo 1.5 milyan oo qof ay u baahanyihiin cuno iyo biyo
Abaartii ugu xumayd muddo sannado ah oo Puntland ka jirta, iyadoo 1.5 milyan oo qof ay u baahanyihiin cuno iyo biyo
November 25, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
1.5 milyan oo qof oo kunool Puntland ayaa u baahan cuno iyo biyo. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa wajahaysa abaartii ugu xumayd muddo sannado ah, iyadoo 1.5 milyan oo qof ay u baahanyihiin cuno iyo biyo.
Iyadoo ay abaarta wali jirto, dadka reer guuraaga ah ah ayaa ka hayaamaya miyiga iyaga oo u guuray magaalooyinka kadib markii ay xoolihii ka dhinteen.
Gobolada Nugaal, Bari, Mudug, Sool, Sanaag iyo Karkaar ayaa ah meelaha ugu daran oo ay abaarta jirta saamaysay.
Gobolka Karkaar, ugu yaraan labo qof ayaa u dhimatay gaajo iyo haraad, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Xilli roobaadkii Deyrta oo baaqatay, taasoo sida caadiga ah la heli jiray Oktoobar ilaa November, ayaa keentay abaarta taasoo la filayo in ay kasii darto bilaha soo socda.
Dowladda Puntland ayaa shalay oo Khamiis ahayd ka codsatay dadka shacabka ah iyo beesha caalamka in ay cuno iyo biyo ku caawiyaan dadka reer guuraaga ah ee ay saamaysay abaarta.
February 26, 2017 Ciidamo hubaysan oo qabsaday xarunta baarlamaanka Puntland ee Garoowe
Muqdisho-(Puntland Mirror) Isfahanwaa ku saabsan dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka Soomaaliya ayaa u dhaxeeya dowlada federaalka Soomaaliya iyo deeq-bixiyeyaasha, sida ay sheegayaan ilo-wareedyo diblomaasi oo lagu kalsoonaan karo. Deeq-bixiyeyaasha ayaa ka cudur-daartay dhaqaalaha ay dowlada federaalka [...]